Complaint letter to the President U Thein Sein about damaging of Masjids by local authorities, USDP and NLD members | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Prime Minister David Cameron with Daw Aung San Suu Kyi and President U Thein Sein
ဒီချုပ် ဘာလုပ်မလဲ? »
အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး TQ very much.
Mimi Koko wrote on the FB wall copied from အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး
မကွေးတိုင်းကံမ မြို့နယ်တွင်လည်း ဗလီကိုဖျက်ပြီးမွတ်ဆလင်ပိုင်ဆိုင်များကိုဖြိုဖျက်နေကြပါသည်။
နောက်ကွယ်က ကြံခိုင်ရေးအမတ်လောင်းပါတယ်လို့ဒေသခံများကပြောနေကြ ပါသည်။ … နောက် ဖားကန်မြို့နယ် စည့်ကူကျေးရွာမှာလည်း ခမရ ၁၆ က ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ကျော် ဦးဆောင်ပြီး ဘုန်းကြီးအတု ၂၀၀ ကျော်က ၁၃ ရက်နေ့ညနေ၆နာရီခွဲ ကစတင်ပြီး စိုင်းတောင်းဗလီကို ဆလိုက်များထိုးပြီးဖြိုဖျက်လိုက်ကြပြန်ပါတယ်။
အခုလိုဖြစ်ရပ်များဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရာ ကျပြီး rule of law ကိုစိန်ခေါ်ရာရောက်ပါကြောင်း …….. သူရမျိုး (၀ိုင်အိုင်ပီ သတင်းထောက်)
နောက် ဖားကန့်မြို့နယ် စည့်ကူကျေးရွာမှာလည်း ခမရ ၁၆ က ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ကျော် ဦးဆောင်ပြီး ဘုန်းကြီးအတု ၂၀၀ ကျော်က ၁၃ ရက်နေ့ညနေ၆နာရီခွဲကစတင်ပြီး စိုင်းတောင်းဗလီကို ဆလိုက်မီးများထိုးပြီးဖြိုဖျက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ကံမမှာဖျက်တာကတော့မနေ့ည ၁ နာရီခွဲမှာ ဗလီကိုအပြီးပြိုအာင်ဖြိုသွားပါတယ်။ ကံမမြို့ နဲ့၁၀မိုင်အကွာက ဟာဂျီမိုဟာမက် အိမ်ကိုအခုဖြိုနေကြပါတယ်လို့သတင်းရရှိသည်။
Comment by Maungmaung Skw
အထူးသဖြင့် ဆိုင်းတောင်၊ဖားကန့်၊လုံးခင်း၊မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း၊ ကမ္မ၊ကျောက်ပန်းတောင်း တို့မှ ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဉပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
U Thein Sein should consider joining his USDP under the NLD umbrella (drkokogyi.wordpress.com)
Tags: Asean, Aung San Suu Kyi, Burma, David Cameron, European Union, Myanmar, National League for Democracy, Naypyidaw, Tatmadaw, Thein Sein, Union Solidarity Development Party, United States, Yangon
This entry was posted on April 15, 2012 at 5:24 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.